Chelsea iyo Everton oo foodda is daraya - BBC News Somali
Chelsea iyo Everton oo foodda is daraya
Image caption Chelsea iyo Everton xifaaltan ayaa ka dhaxeeya
Kooxda Chelsea ayaa u safri doonta kooxda ay ku xifaaltamaan koobka horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyaga oo markan la dheeli doona ciyaar ka tirsan koobka FA.
Labadooduba waxay soo gaareen wareega sideed dhamaadka ama wareega ay isugu soo haraan sideedda kooxood.
Kooxda Reading ee ka dheesha koobka Championship waxay is arki doonaan Crystal Palace oo gurigeeda marti loogu yahay.
Dhanka kalana Watford waxay is arki doonaan kooxdii guulaysta marka ay is arkaan Arsenal iyo Hull.
Kooxda Manchester United iyo kooxda Kale ee Shrewsbury oo ka dheesha koobka League One ayaa wada dheeli doona Isniinta mid kii soo baxana waxay wada dheeli doonaan West Ham.
Ciyaarahani waxay dhici doonaan 11 ilaa 14-ka bisha saddexaad ee sanadkan.
Tababaraha kooxda Chelsea Guus Hiddink ayaa ciyaartii u horaysay ee FA ah oo waliba kama dambays ahayd kooxda Chelsea hogaamiyay sanadkii 2009 isaga oo markaas ay ugu horaysay tababaridda kooxda lagu naanayso Blues.
Chelsea ayayna guushu raaxday oo qaaday koobkii FA ee 2009.
Axaddii xalay ahayd markii ay wada dheeleen Manchester City waxay kaga badiyeen 5-1.
Hiddink oo hadlay ciyaarta Man City kaddib wuxuu sheegay in Everton ay doonayso in ay ka aarsato balse uu rajaynayo in kooxdiisu ay sii waddo sida wanaagsan ee ay natoojooyinka uga soo hoyinayso koobkan.
Natiijooyinka wareegii 16-ka kooxood ee FA.